प्रधानमन्त्रीद्वारा एकैपटक १६५ ओटा सडकको शिलान्यास – NepalayaNews.com
प्रधानमन्त्रीद्वारा एकैपटक १६५ ओटा सडकको शिलान्यास
२१ चैत्र २०७७, शनिबार ११:२२
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार एकैपटक १६५ सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको विशेष समारोह भर्चुअलमाध्यमबाट उहाँले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक ओटा सडक हुने गरी १६५ सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो । रू. ५७ अर्ब १० करोडको लागतमा तीन वर्षमा निर्माण गर्ने गरी ती सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक ओटा सडकको दरले शिलान्यास गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवालालाई शिलन्यास गरेका सडकका काम ढिला नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म कालोपत्र सडक निर्माण र स्तरोन्नति सडक तीन हजार ५१२ किलोमिटर भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ६२८ ओटा सडक पुल (झोलुंगे) पुलबाहेक निर्माण भएका छन् ।
उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चारदेखि ६ लेनसम्म विस्तार गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिदिन ६ दशमलव ५ किलोमिटर बाटो निर्माण संघीय सरकारले गरिरहेको छ । समारोहमा सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यको समेत उपस्थिति रहेको थियो । रासस
विश्‍वराज बास्तोला वोर्ड सदस्य मनोनयन । २१ चैत्र २०७७, शनिबार ११:२२
ज्ञान, बुद्धि विवेक र संघर्षका सागर बुद्धिसागर २१ चैत्र २०७७, शनिबार ११:२२
अफगानबाट फिर्ता हुँदै अमेरिकी सेना, हलो कहाँ अड्कियो ? २१ चैत्र २०७७, शनिबार ११:२२